Ukuhambelana komhlaza | Ukuhambelana kweZodiac kunye neHoroscope - Iimpawu Zezodiac
Ukuhambelana komhlaza: Ethandweni naseBhedini
Xa uzalwa phantsi kwe Uphawu lweZodiac yeCancer, kanye xa uthanda uthando iimpawu zakho ezintle zivela ekufihleni kwicala elimnyama lenyanga.
Lo ngumhlaza omnene, umhlaza owomeleleyo, umdlavuza onomdla kunye nononkala okhusela into ayithandayo ngokwemvelo.
Nje ukuba ufumane iqabane elifanelekileyo akukho thuba lincinci lokuba neetryst ezisecaleni.
I-Monogamy ibaleka kwi-DNA yakho ngokuyinxenye kuba uyayithanda indawo yokubalekela enikezelwa lulwalamano oluhle.
Uluhlu lokuhambelana komhlaza Iziqulatho
Iinyani kunye neMibutho yeMetaphysical
Uthando lokuhambelana nazo zonke iiMpawu zeZodiac ezili-12
Okulusizi kukuba, ubomi abuhlali bunobubele kwintliziyo ebuthathaka yeCancer. Xa umntu ekungcatsha unokukushiya ungenathemba ngokupheleleyo ukuya kwinqanaba lokuphuma ekunene ukunqanda nabuphi na ubudlelwane bexesha elizayo ngenxa yokoyika ukuziva ngale ndlela kwakhona.
Kwelinye icala, ukuba awuzange uzame kwaye ungaze uyithembe enye indlela yokuba wedwa. Esi sisifundo sobomi somhlaza: yiba nokholo kwimo yakho yemvelo kwaye umamele intlebendwane yothixokazi wenyanga okukhokelayo. Ukwiinjongo zokufumana eli qabane linye lomphefumlo onokwabelana naye ngalo lonke ixesha lokuphila kwakho. Umhlaza awenzi zithembiso ungenzi nto. Bakholelwa ngokwenyani 'ekufeni kuyasahlula' emtshatweni.
Ukuba uthandana nomhlaza qaphela ukuba ngasemva kwento eyomeleleyo yangaphandle kukho intliziyo yothando kunye nomoya womntu onezinto ezininzi. Ukusebenzisana noMhlaza kuya kusiba nzima ngakumbi kuba babenza abazali babo kwaye bahlala bethelekisa amaqabane abo nomama okanye notata. Kungenxa yokuba iiCancer zifuna umntu ukuba azijoyine ngaphakathi kwegobolondo kwaye enze ikhaya. Kule nto, iCancererian inezimvo ezithile ezifanelekileyo ezithatha ixesha lokusebenza.
Njengenyanga, iimvakalelo zakho zomhlaza zixubene kwaye ziyancipha. Ukuziphatha yinto eqhelekileyo, kwaye ngamanye amaxesha bathetha iingqondo zabo ngaphandle kokwazi ngokutshintsha kwabo kwangaphakathi. Oku kungonakalisa umhla ngaphandle kokuba ungumntu oguqukayo obona ngaphaya kwamagama arhabaxa kwindalo yeLunar yeCrab egcina uloyiko kunye nokuthandabuza, kwaye inokuba wenzakaliswe kakubi ngaphambili.
Ukulinganisa oku, bahlala benovelwano kumntu abamthandayo. Xa ugula okanye ungaphandle kohlobo lweCrab lelokuqala ecaleni kwakho 'ukwenza ngcono'. Banomtya wokuqina wokuba ngumama (nditsho nabafana) kwaye bazama ukufumana izisombululo ozifunayo.
Ezinye zeempawu ezifanelekileyo zeCancer zibandakanya ILibra , intlanzi kwaye Capricorn . Ngaphandle kwezinto ezintle kule miqondiso yeLanga Iimpawu zomhlaza zihlala zilumkiso.
Baza kulinganisa iqabane elinokubakho lizama ukufumanisa ukuba bangasarhaza ngokukhuselekileyo isanti kunye nawe. Vumela loo mgama. Abantu abaphambili kakhulu neCrab kubenza balumke kwaye bazikhusele.
Ukuba uyabavumela bathathe ixesha labo, xa bekulungele, bayayazi indlela yokuhambisa kunye nokuhlukumeza ngokwasemphefumlweni.
Ubugcisa bokuthandana kunye nokutsala yinto le nto uyayithanda i-Star Sign. Abafuni ukuqengqeleka okukhawulezayo emfuleni okanye kumcimbi-bafuna ubudlelwane bokwenyani, iqabane lobomi, kwaye bazimisele ukulinda.
Emva kokuba ufumene iqabane, i-Cancer instinct yinto enomdla kakhulu, okhulisayo umthandi nangona ngamanye amaxesha uyidinga.
Ukuba ubona iCancer kwaye uziqwalasele uhlobo ofuna ukuzimela okanye iqela, musa ukuthatha iCancer ukulala. Esi sisipho esinzulu ngokweemvakalelo kuye, kwaye enye apho bavula khona iqokobhe labo elisesichengeni. Lindela ukuba uza kufunda lukhulu malunga neqabane lakho ngala maxesha, kwaye ude ube neenyembezi ezimbalwa enkosi kolu phawu lwaManzi.
Indoda eyi-virgo kunye nepisces umfazi ebhedini
Ngexesha lothando lokwenza uMhlaza uthanda ukuxoxa ngezo mvakalelo zisondeleyo. Le yenye yeendlela 'abazilungiselela' nesithandwa sabo. I-Crab inomdla kakhulu ekufumaneni nasekufezekiseni iminqweno yakho, ngakumbi ukuba ubazisa ukuba bayadingeka kangakanani. Yenza ixesha lokuandulela ngaphambi kwesondo- izijekulo zothando; ikhandlela likhanyise iibhafu zeblue, umculo owuthandayo kunye nokucotha, ukuthinta inkanuko.
Umhlaza ubonakala unonamathele ngokuqinileyo kulwalamano olusenyameni ngakumbi ngokwenza izijekulo zezandla. Bayakuxabisa ukwenza uthando ngokukhanya kwenyanga kunye neqabane elinxibe ngohlobo lokuba ungasusi amehlo akho.
Umhlaza uthetha ulwimi lokunika kunye nenkonzo. Isidlo sakusasa ebhedini siya kukhokelela kuninzi ngakumbi.
Lumka nje unxibelelana njani nomhlaza. Baphula-phula ngentliziyo, hayi ngentloko kwaye ungamosha ubusuku obulungileyo obunomdla kunye nokuncipha okuncinci.
Iinyani zomhlaza kunye neMibutho yeMetaphysical
Imihla: Ngeye-21 kaJuni- kaJulayi 20
Ibinzana eliphambili: 'Ndiyeva'
Ilitye lokuzalwa: Pearl (ngoJuni); URuby (Julayi)
Inani lokungcangcazela Ukubala 2 & Ukubala 7
Umbala: Violet , LuLwandle oluhlaza & Isilivere
Chakra: ISacral (iSvadhisthana)
Iwele lamaTshayina leZodiac: Iigusha
Amawele amaTshayina amaZodiac amawele: Iigusha
Umbutho weKhadi leTarot: Inqwelo yokulwa (Umhlaza), Umbingeleli oMkhulu (Inyanga)
Ukuphilisa Amakristali: Emerald , Amber, Ilitye lenyanga , Intsingiselo
Umhlaza woSaziwayo: ULouis Armstrong, uHarrison Ford, u-Ernest Hemingway, uTom Cruise, uKhloe Kardashian, uJane Lynch
Ukuhambelana komhlaza nazo zonke iiMpawu zeZodiac ezili-12
Aries kunye noMhlaza
Uthetha Whew malunga nokuguquguquka. Unxibelelwano lweeAries neCancer lunobushushu obuninzi, kodwa ayisiyiyo yonke kwigumbi lokulala. Bazalelwe ukuphikisana.
Umhlaza wenzakala ngamazwi e-Aries ahlabayo emva koko ahlasele ngezo pincers zizaliswe ngamagama ambalwa akhethwe kakuhle. I-Aries nayo inenkululeko kakhulu, ngakumbi ngezemali. Oku kuqhuba umhlaza ukuba uphazamise ngakumbi kuhlahlo-lwabiwo mali lwasekhaya.
Obu budlelwane abufanelanga idrama.
I-Taurus kunye neCarcer
Umdlalo weTaurus kunye neCancer ulingano kwi-Astrological yayo!
Yomibini le miqondiso iyaluxabisa uthando lomnye kunye nomnqweno wokhuseleko. Nangona iTaurus ingoyilo olugqithisileyo ebhedini, iCancer iyenzela loo nto kwaye ikwanika neTaurus ingqalelo abayinqwenelayo, ngelixa iBull igcina iinkalo zenyanga zomhlaza zingaphantsi.
Ngokwezezimali aba babini bahlala ngokulula kumnyama kwaye benze ikhaya eligcwele ubumnandi obonwabisayo.
IGemini kunye noMhlaza
Musa ukuba yimagpie ethandekayo Umhlaza. Le Gemini intle-mhlophe yindlela engenakuthelekiswa nanto kuwe. Ewe, uyonwaba kakhulu xa usabelana ngesondo kunye ngenxa yendalo ye-Gemini, kodwa loo nto iyaphela xa ubona indlela abaziphatha ngayo kwimicimbi yentliziyo.
Ukongeza iGemini ngumoya wasimahla obaleka kuyo nayiphi na imeko yokuba 'nomoya' ngomnye. Namathela kwigobolondo lakho kwaye ulinde olunye uphawu lweLanga ukuba uzulazule elwandle.
Umhlaza kunye noMhlaza
Xa imihlaza idibana isini siphuma kweli hlabathi!
Onke amaza okutshintsha kweemvakalelo ayazibopha zombini ezi zinto kwi-net exhomekeke kakhulu kwaye ethe-ethe kakhulu. Akubobulumko ukuba uMhlaza uphume kwigobolondo lakhe uye kolunye uphawu olufanayo - amathuba enzonzobila ezinzulu kunye nenqala eqhubekayo iphezulu kakhulu. Zikhusele.
Nokuba ujonge oku njengokhawuleza okanye uhambe nje.
Leo kunye noMhlaza
NjengoMhlaza kukho amaxesha apho iimvakalelo zakho zinomsindo kwaye ngamanye amaxesha xa iincindi zamadlala zishushu. U-Leo unokuba yimpendulo kuyo yomibini imizabalazo.
Umlingane ka-Leo ngokwemvelo ukhupha imo ephumayo kunye nephumayo elinganisa imeko yakho eblue. Okwangoku ungasisebenzisa isipho sakho se-gab ukumtyebisa uLeo wakho ngentetho emnandi ethe tye kunye nokubabaza, akufumanisa kukoyikisa ngokupheleleyo.
Kwinqanaba le-1-10 olu bambiswano lufumana ubuncinci i-8 ngokuxhomekeke kwezinye izinto ezikwiitshathi.
I-taurus mfazi kunye nendoda yanamhlanje ebhedini
IVirgo kunye noMhlaza
Obu budlelwane buza phantsi kwesihloko esithi 'nceda kwaye uhlekise'.
Ngelixa iqabane leVirgo linobuchwephesha obuncinci kunawe, kuninzi okungaphantsi komgangatho wokuba ubuntu bakho buqhakaze kumnatha wokubonisa uthando kunye nemfesane.
Ningabahlobo abakhulu omnye komnye, nibe nokuqonda okusondeleyo kumaqabane akho kwiimpawu ezahlukileyo kunye nendlela onokuzuza ngayo omnye komnye.
Vumela iVirgo yakho ikukhusele ngelixa uyonwabisa. Ubhejo olukhuselekileyo kuwo omabini amaqela.
ILibra kunye noMhlaza
Ewe, oh! Kukho ingxaki enkulu eparadesi.
Nobabini ninokwakha indawo entle, enombono apho niza kuhlala khona, kodwa ninyamezelana ngaphakathi kweso sithuba yinto eyahlukileyo.
ILibra ayinakuyiqonda imeko yeCancer kwaye iCancer ibone iLibra inesidima kakhulu ukuya kwinqanaba lokuncipha. Akukho qabane livuya kakhulu kwaye alinakubonakala ngathi lixhuma ebhedini.
Sithi thatha ukudlula okunzima kule.
IScorpio kunye noMhlaza
IHuzzah kunye neHoray!
Umhlaza kunye nokulingana kweScorpio sisiqwenga sedynamethi yeenkwenkwezi elinde ukuba kukhanyiswe. Iqabane lakho leScorpio alinasidingo semikhwele ngenxa yokuba uthembekile ngokupheleleyo kubudlelwane kwaye unikezela ngotyalo-mali olomeleleyo lweemvakalelo. IScorpio siphendula ngothando olukhulu kunye nenani elimnandi ngokulinganayo lokusondelelana.
Olu lwalamano alunakuhlala lodwa, lunokubangcono nangaphezulu kweminyaka.
Icebiso: sukuphila ukusondela kubamelwane - uya kubavusa nge-adventures ezinzulwini zobusuku.
I-Sagittarius kunye neCarcer
Ngaba asinakuba ngabahlobo nje?
Leyo yeyona motto intle yomdla weCancer-Sagittarius.
NjengoMhlaza uya kubona iSagittarius ikukudlala ngothando kakhulu kwaye ihlala ijikajika. Ngeli xesha i-Sagittarian iyadinwa yile nto bayitolikayo njengentswelo engapheliyo.
Nobabini nifana neenkuku omnye komnye i-aura yeentsuku ezininzi - kucacile ukuba kuyabanda kwaye kuyacaphukisa.
ICapricorn kunye neCancer
Ubume obuchaseneyo kodwa umtsalane omkhulu emzimbeni, umhlaza kunye neCapricorn hookup zihlala ziba bhetele kubobuhlobo kunobuhlobo obuzinikeleyo.
NjengoMhlaza unqwenela ukuhoywa kunye nobuntununtunu. ICapricorn inexesha elincinci lokwenza loo nto, ukuba uxakeke zizinto ezahlukeneyo zokuzonwabisa kunye neminye imisebenzi ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba uzive ukhutshiwe.
Yongeza kuloo nto yokuba omabini amacala afumana ukungxama - ngokusisiseko ukukhwela kuyinto entle ngaphandle kwezinye zeetshathi zokwenza njengebhanti lokhuseleko.
I-Aquarius kunye neCancer
Kubo bonke abo bantu banomhlaza abafunda oku, khumbula- iAquarius inkulu engxoweni kodwa ikukude le duo iyakufumana.
Umtsalane wakho we-Aquarian uqhelekile kuba i-Aquarius ithathwa ngokuba 'luphawu lwamanzi olulahlekileyo', kodwa alunakuhlala. Ekupheleni kosuku, nokuba angakanani na amanzi ayinxalenye yetshathi ye-Aquarius, basayimpawu yoMoya. Amanzi + Umoya = iTornado.
Eli qabane liguqukile kwaye linobubele kwizinto ozithandayo, kwaye unokwenzakala ngokulula ngala mazwi oMqondiso weNkwenkwezi ozenzekelayo.
Beka le 'kwisebe leepali ezilishumi'.
Iintlanzi kunye neCancer
Thetha malunga nokuhamba okude elunxwemeni kunye nokuzonwabisa ngesondo kwi-surf!
Intsebenziswano yePisces kunye neCancer iphumelele kakhulu kwaye iyahambelana. Zombini iimpawu zinokunyaniseka kunye nemvakalelo yokuxhasa ngexesha elibi kakhulu.
Unothando, kunye nokunyaniseka okuya kuwe. Xa kufika ixesha lokuthanda ukwenza uya kufumana iqabane lakho lasePiscean lokucinga kunye nokuzimisela ukuphonononga izimvo ezintsha kunye nawe. Ngaba!
Umhlaza wendoda kunye ne-virgo umfazi ngokwesondo
Ukuhambelana kwendoda kunye ne-leo kwabasetyhini
Umfazi we-aquarius kunye ne-aries yendoda ngokwesondo